विश्वकपः दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्ल्यिो न्यूजिल्याण्ड – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकपः दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्ल्यिो न्यूजिल्याण्ड
काठमाडौं, असार ५ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको खेलमा न्यूजिल्याण्ड ४ विकेटले विजयी भएको छ । कप्तान केन विलियम्सनले शतक बनाएपछि द. अफ्रिकाविरुद्ध खेलमा न्यूजिल्याण्ड ४ विकेटले विजयी भएको हाे । जीतसँगै न्यूजिल्याण्ड ९ अंकका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । दक्षिण अफ्रिका भने यो हारसँगै सेमिफाइनल दौडबाट लगभग बाहिरिएको छ ।
बुधबार राति सम्पन्न खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले दिएको २४२ रनको लक्ष्य न्यूजिल्याण्डले ४९.३ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । उसका लागि कप्तान विलियम्सनले १ छक्का र ९ चौकाको मद्दतमा १३८ बलमा नट आउट १०६ रन बनाए । जारी विश्वकपमा उनको यो पहिलो शतक हो । यस्तै कोलिन डि ग्राण्डहोमले ६०, मार्टिन गुप्टिलले ३५, जेम्स नीशमले २३, कोलिन मुनरोले ९, रस टेलर, टम लाथमले एक–एक र मिचेल सान्टनरले अविजित २ रन बनाए । बलिङमा क्रिस मोरिसले ३, कागिसो रबाडा, लुंगि एन्गिडी र एन्डीले फेहलक्वायोले एक–एक विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको द. अफ्रिकाले निर्धारित ४९ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २४१ रन बनायो । उसका लागि रस्सि भान डर दुसेनले नट आउट ६७, हशिम अमलाले ५५, एडन मार्कमले ३८, डेभिड मिलरले ३६, कप्तान फाफ डुप्लेसीसीले २३, क्विन्टन डि ककले ५ र क्रिस मोरिसले नट आउट ६ रन बनाए । बलिङमा लकि फग्र्युसनले ३, मिचेल सान्टर, कोलिन डि ग्राण्डहोम र ट्रेन्ट बोल्टले एक–एक विकेट लिए ।
ट्याग्स: south africa vs news zealand